147 Rumbidzai Jah,+ Nokuti zvakanaka kuimbira Mwari wedu;+ Nokuti zvinofadza—kurumbidza kwakakodzera.+ 2 Jehovha ari kuvaka Jerusarema;+ Anounganidza vakaparadzirwa vaIsraeri.+ 3 Anoporesa+ vakaora mwoyo,+ Uye anosunga panovarwadza.+ 4 Anoverenga nyeredzi kuti ingani;+ Anodzishevedza dzose nemazita adzo.+ 5 Ishe wedu mukuru uye ane simba guru;+ Kunzwisisa kwake hakurondedzereki.+ 6 Jehovha anobatsira vanyoro;+ Anowisira vakaipa pasi.+ 7 Imbirai Jehovha muchibvumirana, muchimuonga;+ Imbirai Mwari wedu norudimbwa,+ 8 Iye anofukidza matenga nemakore,+ Iye anogadzirira nyika mvura,+ Iye anoita kuti uswa hwakasvibirira humere+ pamakomo. 9 Anopa mhuka zvokudya zvadzo,+ Pamwe chete nemanyana emakunguo anoramba achishevedzera.+ 10 Haafariri simba rebhiza,+ Uyewo haafariri kumhanya kwemakumbo omunhu.+ 11 Jehovha anofarira vaya vanomutya,+ Vaya vanomirira mutsa wake worudo.+ 12 Kudza Jehovha,+ haiwa iwe Jerusarema. Rumbidza Mwari wako, haiwa iwe Ziyoni.+ 13 Nokuti akasimbisa mizariro yemagedhi ako; Akakomborera vanakomana vako vari mukati mako.+ 14 Anoisa rugare munharaunda yako;+ Anoramba achikugutsa nemafuta egorosi.+ 15 Anotuma zvaanotaura panyika;+ Shoko rake rinomhanya kwazvo. 16 Anopa chando sezvaanoita mvere dzemakwai;+ Anoparadzira mazaya echando sezvinongoitwa madota.+ 17 Anokanda mvura yake yakaita chando sezvimedu.+ Ndiani angamira kana chando chake chauya?+ 18 Anotuma shoko+ rake ozvinyungudutsa. Anoita kuti mhepo yake ivhuvhute;+ Mvura inoyerera. 19 Anozivisa Jakobho shoko rake,+ Uye Israeri mirau+ yake nezvaakatonga.+ 20 Haana kuitira chero rudzi rupi zvarwo saizvozvo;+ Kana zviri zvaakatonga, havana kuzviziva.+ Rumbidzai Jah!+